Viable Business? — Balance Professional Services
ကိုယ့်လုပ်ငန်း အလုပ်ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်
လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုတော့ သူရဲ့ရေရှည်တည်တံ့နိုင်စွမ်းနဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အမြတ်တွေကိုရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းနဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုအမြတ်အစွန်းထွက်လေလေ၊ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းက ပိုပြီးကောင်းလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းဆိုတာက ယုံကြည်မှုတစ်ခုလိုပါဘဲ။ ယုံကြည်မှုတစ်ခု ပျက်စီးသွားရင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ခက်ခဲလွန်းသလို၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုကလည်း အမြတ်အစွန်းထွက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး ဆိုရင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ရှင်သန်နိုင်စွမ်းဆိုတာက အမြတ်အစွန်းနဲ့သက်ဆိုင်သလို အကြွေးကင်းခြင်းနဲ့ ငွေရလွယ်၊ ငွေဝင်လွယ်မှုတွေအပေါ်မှာလည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်က လုပ်ငန်းတစ်ခုစမယ်၊ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းက ရေရှည်မှာရော ရေတိုမှာရော ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိမရှိကို အရင်ဆုံးစဉ်းစားသုံးသတ်ကြည့်ရပါမယ်။ ဒီလိုသုံးသပ်ကြည့်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ အရင်းအနှီးတွေ၊အချိန်တွေ ကို အလုပ်မဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းပေါ်မှာ ပုံအောခြင်းမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု ရှင်သန်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
လုပ်ငန်းကို ရှင်သန်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် ဆိုရင် အောက်ပါအချက်တွေကို တည့်သွင်းစဉ်းစားသုံးသပ်ရပါမယ်။
(၁) Unique Selling Proposition( USP )
Unique Selling Proposition ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ Product/Service တွေက ပြိုင်ဘက်တွေထက် ဘာတွေသာလဲ၊ ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့ အချက်တွေရှိလဲဆိုတာပါ။ ဥပမာ။ ။ အရည်အသွေး၊ ဈေးနှုန်း၊ ဝန်ဆောင်မှု။ Unique Selling Proposition ကတော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကို စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ ပထမဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစား ရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Product/Service ကထူးခြားကောင်းမွန်နေမှ ပြိုင်ဘက်တွေကြားထဲမှာ ထင်ပေါ်လာနိုင်မှာပါ။
(၂) Stable Customer Base (တည်ငြိမ်သော Customer အင်အား)
သူများထက်ထူးခြားပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ Product/Service တွေရှိဖို့ ဆိုတာက ပထမ အဆင့်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Product တွေကို ဘယ်လိုလူတွေက အသုံးပြုမလည်း၊ အားပေးမလည်းဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ Customer အသစ်အမြဲရဖို့ကလည်း အရေးကြီးသလို ပုံမှန်အသုံးပြုတဲ့ ဖောက်သည်တွေ ရှိဖို့ကလည်း လိုပါတယ်။ ပုံမှန်ဖောက်သည် တွေရဖို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ Product /Service က လုံလောက်မှုရှိလား ဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။
(၃) Competitive Advantage (ယှဉ်ပြိုင်မှု အားသာချက်)
ကိုယ့်ရဲ့ Product ကကောင်းနေပြီ၊ Customer တွေလည်း ပုံမှန်ရှိနေတောင်မှ ကိုယ့်ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ ပြိုင်ဘက် အချိန်မရွေး ပေါ်လာနိုင်တယ် ဆိုတာ ကိုအမြဲသိထားရပါတယ်။ ရှိပြီးသား ပြိုင်ဘက်တွေရော၊ ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကိုပါ အမြဲစောင့်ကြည့်နေရပါမယ်။ သူတို့တွေထက် သာအောင်ကိုယ် ဘယ်လိုလုပ်မလည်းဆိုတဲ့ Strategy တွေကိုလည်း ချထားရပါမယ်။
(၄) Cash Stability (ငွေတည်ငြိမ်မှု)
ငွေတည်ငြိမ်မှုက လုပ်ငန်းတစ်ခု ရေရှည်ရှင်သန်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးအချက် ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် လည်ပတ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အတွက် ငွေတွေသာမက လုပ်ငန်းကြပ်တည်းချိန်၊ အဆင်မပြေချိန် တွေမှာပါ အသုံးပြုလို့ ရလောက်တဲ့ ငွေပမာဏ တစ်ခုအမြဲရှိထားရပါမယ်။ ငွေတည်ငြိမ်မှု ဆိုတာက နေ့ချင်းညချင်း ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းမှာ မလိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေလျှော့ချတာ၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေ လျှော့ချတာ၊ လုပ်ငန်းက ငွေတွေကို လိုတာထက်ပိုပြီး ထုတ်သုံးတာ တွေ ကိုမလုပ်ရပါဘူး။
(၅) လုပ်ငန်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေတွေကို အမြဲတမ်း ဂရုတစိုက်ရှိခြင်း
လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများက တစ်ခါတစ်လေ သူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍရေးကဏ္ဍတွေကို လျစ်လျူရှုမိတတ်ကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းရဲ့ အခြားများပြားလှတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ ရှုပ်နေပြီး မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ပကတိဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ သိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ရင်တော့ စာရင်းကိုင် တစ်ယောက်ခန့်ထားတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပြင်က Accounting Firm တစ်ခုကို Outsource လုပ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်သင့်ပါတယ်။
(၆) လုပ်ငန်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးရှင်သန်နိုင်စွမ်းကို ဆုံးဖြတ်ကြည့်ခြင်း
လုပ်ငန်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးရှင်သန်နိုင်စွမ်းကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုရင် လုပ်ငန်းရဲ့ Business plan ကို တဆင့်ပြန်လည်ကြည့်ရပါမယ်။ Business plan တစ်ခုကို အရင်ရေးဆွဲ ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက လုပ်ငန်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအပေါ်မှာ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြည့်ရပါမယ်။ Business Plan ကိုလည်း စပြီး ဆွဲကတည်းက ပုံသေကြီး မထားပဲနဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေ၊ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတွေအပေါ်မှာ လိုက်ပီး သင့်တော်သလို ပြောင်းလဲရပါမယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်တွေကတော့ လုပ်ငန်းရဲ့ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကို သုံးသပ်တဲ့အခါမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အချက်တချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပေးဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Business Advice, AccountingHtet Khaing Hla Soe November 20, 2018 Business AdviceComment
EconomyHtet Khaing Hla Soe November 10, 2018 Economy, Myanmar